नेपाल आज | सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेविरुद्ध सुक्ष्म निगरानी (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलका नेतालाई खुकुरी देखाएर काट्छु भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अफवाह फैलाउने एक व्यक्ति सोमबार पक्राउ परे । मलेशियाबाट फर्किएर आएका उनी फेरि विदेशिने तर्खरमा थिए । राजनीतिक अवस्थाप्रति रुष्ट उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आक्रोश पोखे तर क्षणिक रमाइलो र लाइक कमेन्टका लागि गरेको उनको कामले उनलाई प्रहरीको खोरमा पुर्याएको छ ।
पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी थालेका छ । व्यक्ति वा संस्थाको मानमर्दन गर्ने, जथाभावी लेख्ने, अर्कालाई गाली गलौजमा उत्रिनेविरुद्ध नेपाल प्रहरीले निगरानी थालेको हो । प्रहरीले निगरानी मात्र थालेको छैन त्यस्ता काम गर्नेमाथि धमाधम पक्राउसमेत गर्न थालेको छ ।
अझ पछिल्ला दिनमा शालिकमराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा त विभिन्न व्यक्ति संस्थालाई पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउको केशलाई लिएर विभिन्न व्यक्तिले छारष्ट गाली गलौजमा मात्र उत्रिएका छैनन् जथाभावी लेख्न थालेका छन् । यस्ता काम गर्ने गराउनेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।
कतिपयले विदेशबाट समेत लेख्ने गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक दल, भिभिआईपी, विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध विदेशमा बसेर जथाभावी लेख्नेविरुद्ध प्रहरीले विदेशबाट समेत झिकाएर प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्ने भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा साइबर क्राइम बढ्दै गएको सन्दर्भमा हामीले महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापासँग साइबर क्राइम, साइबर क्राइममा अपराध गर्नेमाथिको कारबाही र पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर अनुमानका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेविरुद्ध के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर सोधेका छौँ ।
उनका अनुसार साइबर क्राइम गर्नेलाई ५ वर्षसम्म जेल र १ लाख जरिवाना लाग्छ । त्यसो हुँदा पनि साइबर क्राइम बढेकोप्रति के सजायको व्यवस्था कम भएर हो त ? थापा भन्छन् –‘‘ एउटा शब्द मात्रै कानून विरुद्ध, व्यक्ति गाली गलौज लेख्नेलाई पक्राउ गरेर सजाय गरिन्छ भने कमी हो र ? ’ प्रस्तुत छ थापासँगको विस्तृत कुराकानी ।